Isinqumo se-ASA ngodaba lwabagijimi
INHLANGANO eyengamele ezokugijima eNingizimu Afrika, i-Athletics South Africa (ASA), isiphumele obala ngokuthi ayikuboni kuphephile ukuthi kubuyelwe ensimini kubagijimi, ikakhulukazi njengoba ziya ngokukhula izibalo zabahaqwe yiCorona kuleli.
I-ASA ikhiphe lesi sitatimende ngempelasonto, phezu kokuthi uhulumeni enikeze igunya lokuthi abagijimi nabo bonke abenza imidlalo ehlukene ngaphansi kwe-Athletics, sebengaqala ukuziqeqesha futhi nemiqhudelwano isingaqala njengoba befakwe ngaphansi kwemidlalo lapho kungekho ukuthintana khona.
Ngomlomo kamengameli we-ASA, * -Aleck Skhosana, abakwazi ukuqinisekisa ukuphepha kwabadlali njengoba kusho imigomo eqinile yezokuphepha ebekwe uhulumeni.
Esitatimendeni esithunyelwe ngempelasonto, kuvelile ukuthi i-ASA isimbhalele ungqongqoshe wezeMidlalo, uNathi Mthethwa, imazisa ngesinqumo sayo.
“Lokhu kungemuva kokubhunga kabanzi nebhodi ye-ASA eqaphele ukuthi ukutheleleka ngeCovid-19 kuya ngokwenyuka eNingizimu Afrika, okubeka engcupheni yokutheleleka kubasubathi nabanye abathintekayo, bese bebhekana ngqo nokufa,” kusho isitatimende.
Le nhlangano ithe ayikho imiqhudelwano yasekhaya ezoba nayo futhi ngeke ibe yingxenye yemiqhudelwano yangaphandle, kuze kube wukuthi igculisekile ngokuthi kuphephile noma uma isiphinde yalulekwa umnyango wezeMidlalo nenhlangano eyengamele lo mdlalo emhlabeni, i-World Athletics.
“Yize ezokugijima zichazwe njengomdlalo okungathintwana kuwona kodwa kunezimo ezingeke zigwemeke ezingenza kube nzima ukulawuleka uma kunemiqhudelwano, okwenza sikubone njengento engenzeka ukuthi kube nokutheleleka. I-ASA inqume ukuthi icophelele ngoba ukutheleleka okukodwa noma ukufa koyedwa kuyosho lukhulu emdlalweni wethu ikakhulukazi uma sazi ukuthi yisimo ebesinganqandeka.
“Njenge-ASA asikeneliseki ngokuthi kumele sibeke abadlali nabaqeqeshi esimeni esingaphephile. Asifuni ukuthi kube khona noyedwa emndenini wezokugijima ozoba yingxenye yezibalo. Siyayazisa impilo. Yiyona ehamba phambili kwi-ASA,” kusho uSkhosana.
Isihlabani somdlali we-long jump kuleli, uRuswahl Samaai, sisishayele ihlombe lesi sinqumo se-ASA.
“Ngiyaseseka 100% lesi sinqumo. Bningi kakhulu absengozini,” kubhala uSamaai ekhasini lakhe kwi-twitter ephendula esitatimendeni se-ASA.
Lo mdlali ubesanda kukhala ngokuthi abazi ukuthi yikuphi okumele bakwenze ngemuva kokuthi uMthethwa egunyaze ukuqala kokuziqeqesha nokudlala kweminye imidlalo ngaphansi kwesigaba sesithathu sikathaqa.
I-ASA ithe abagijimi abanemishwalense efaka neCovid-19 bangaziqeqesha ezindaweni ezizimele eziphephile nezilandela imigomo yokuhlanzeka ebekwe umnyango.